महिनावारीमा पेट दुख्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? छुटकारा पाउन अपनाउनुहोस् यी उपाय – Dainik Samchar
May 22, 2022 981
७) अदुवाः एक कप पानीमा अदुवालाई काटेर उमाल्नुहोस्। यदि यसको स्वाद मिठो लागेन भने थोरै नुन पनि हाल्नुहोस् र खाना खाइसकेपछि दिनको तीन चार पटक खाने गर्नुभयो भने पीडाबाट मुक्ति पाइन्छ।
Prevदाँतमा किरा लागेर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी पाउनुहोस् राहत
Nextएमाले मेयरको ३५१२, उपमेयर ६१४९ मतले अगाडि